रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले पायो आइपिओ बिक्रि गर्न अनुमति जानौ कति कित्ता - E-BreakingNews
Home Karobar रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले पायो आइपिओ बिक्रि गर्न अनुमति जानौ कति कित्ता
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले पायो आइपिओ बिक्रि गर्न अनुमति जानौ कति कित्ता
रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सले ६३ करोड रुपैयाँको आइपीओ जारी गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । त्यसैगरी, कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको उक्त आइपिओलाई इक्रा नेपालले ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ । ग्रेड ४ रेटिङले कम्पनीको आधारभुत पक्ष औषत भन्दा तल रहेको देखाउँछ ।
निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्नका लागि असार ९ गते मंगलबार सेबाेनमा निवेदन पेश गरेकोथियो ।कम्पनीले आइपीओ जारी गर्न सानिमा क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिसकेको छ । रिलायन्सले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको ६३ लाख कित्ता आइपीओ जारी गर्न नियामक निकायबाट अनुमति पाएको हो ।
रिलायन्सले जारी पुँजीको ३०% सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीको उक्त साधारण शेयर सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ ।
गत आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा रू. ८६ करोड ९८ लाख जम्मा भएको छ । सोही अवधिमा कम्पनीले बीमा लेखको धितोमा राखेर रू. ९ करोड ७१ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ । रासस